Vanhu vanowanzo funga nezvemibvunzo iyi kana uchitenga sofa idzva reimba yako, manyorerwo acho anoyevedza, chii zvinhu zvinogara kwenguva refu, dehwe kana jira pasofa ndeipi iri nani? Chaizvoizvo, pane zvakawanda zvinhu zvekutarisa kana bhajeti, nyaradzo, chimiro, nezvimwewo shure kwezvose ndechimwe chezvikamu zvakakosha zvehupenyu hwako. Panyaya yeganda vs jira pasofa, zvinozotariswa nemararamiro aunoita nezvauri kurarama. Saka, isu tinonyora pazasi mapoinzi ekureva kuti utenge yakakodzera sofa reimba yako.
Chii chekutarisa kana uchitenga dehwe uye mucheka sofa
Kana zvasvika pakunyaradza zvinonyanya kuzviisa pasi zvichibva pakunzwa kwako. Naizvozvo chaunongoita chete kuzvibvunza, ndeipi inonzwa zvirinani pamuviri wako?
Kunzwa kwakajairika ndekwekuti jira rakasununguka kupfuura reganda cuz rakapfava, zvinonzwisisika, uye zvishoma kupisa-anopindura kumakamuri mamiriro. Asi zvinoenderana nemucheka zvinhu uye rutsigiro system zvakare. Kazhinji, machira emasofa anofema kupfuura masofa ematehwe. Kunyangwe ukagara kwenguva refu, magaro ako haanyanye kupisa, nyorova uye zvakazara, izvo zvinoita kuti vanhu vanzwe kugadzikana uye kudzikisira kutsamwa. Zvisinei, chinhu chimwe chinofanira kuchengetwa, kuti mamwe machira anodhura anozoita akasununguka uye ogadzira kubatanidza pamakusheni.
Kana iri sofa rematehwe, inowanzo kukanganiswa nemamiriro ekunze. Munguva yechando, iyo sofa yeganda inogona kutonhora zvakanyanya kubata kana saiti, asi chero bedzi iwe ukatora gumbeze pairi ichadziya kusvika padyo netembiricha yemuviri wemunhu. Muzhizha, kunyangwe iwe usina mhepo yekuisa inoisa, Sofa reganda rinotonhora kupfuura jira izvo zvinoita kuti utike ziya uye unamatire kune dehwe. Zvirokwazvo, tinokurudzira kuisa mamiriro ekudzora mamiriro ekunze, izvo zvinounza kunyaradzwa kwakawanda mumamiriro ekunze anopisa.
Mukukakavadzana kwemutengo weganda vs.. machira masofa, kana vaviri vari muchimiro chimwe chete, yakagadzirwa neyakaenzana mhando furemu, dehwe rinodhura kazhinji.
Ndakatsvaga zvese pasofa nemachira paWayfair, mhedzisiro mhedzisiro inoratidza mutsauko wavo. Iyo dehwe rakakwirira kwazvo kupfuura jira. Asi, kune mamwe machira eumbozha akagadzirwa nevagadziri vane mukurumbira anodarika mutengo wemasofa aya ematehwe. Iko kune zvakare mamwe akaderera-egiredhi masofa emasofa anodhura pane iyo jira kana iwe ukasatora nyaradzo uye chitarisiko mukutarisisa. Mutengo unowanzo kuratidza hunhu uye hupenyu hwesofa, saka hapana mubvunzo kuti dehwe rinogara kwenguva yakareba kupfuura jira kana risina kukuvara pachikwama.
Naizvozvo, yekutanga iwe yaunofanirwa kufunga ndeye bhajeti, kozoti imba yekushongedza, chimiro chemhuri. Izvo zvakanyanya mari kusarudza sofa yemucheka iyo inogona kuchengetedza hafu yemitengo. Masofa ematehwe anokodzera kune vanhu vane mamiriro akanaka emari kana makamuri ekugamuchira kuti vatenge. Ipo machira emasofa ari akakodzera zvakanyanya kumhuri dzemhuri kunyangwe iwo akawanda masitayera kana mitengo inoshanduka.
Mucheka uye pasofa reganda zvese zvine hwakakura dhizaini yemapatani uye mavara kusarudza, iyo inofanirwa kufananidzwa nemba yese.
Kazhinji, machira emachira anopa akawanda sarudzo kupfuura dehwe nekuda kwavo kwakadzvanywa marongero emapatani, mavara, zvimiro, uye michina yekumisikidza. Kana uchingofunga kuisa sofa yemucheka saka kana uchishongedza imba yako hapana chekuita, cuz unogona kutsvaga chero dhizaini uye ruvara kuti usangane nekamuri. Yakave sarudzo yekutanga kune vanhu vazhinji, inomiririrwa neyakajairika American machira masofa anobatsira kubva kune yavo yakaoma dhizaini, zvigadzirwa zvepamusoro, dhizaini yesainzi, kugona kwekugadzira uye nyaradzo yakakura.
Kwete, mashoma ekushongedza imba anokwanisa kuenderana neepamusoro-soro yemhando yeganda sofa. Kana isina kukodzera mukamuri, yakakwenenzverwa kukanganisa kunogona kutumirwa. Chokwadi kana ichienzaniswa mushe inogona kuratidza yakasarudzika elegance kune kamuri iyo yakaoma kutevedzera mune jira. Chakajairika cheGanda ndiwo masitayiti echesterfield ayo ari echinyakare. Zvisinei, semutemo, matehwe ematehwe anowanzo kuve anochinja kupfuura avo machira. Kana iwe uchida kuve neazvino kana echazvino kutaridzika, inowanzoita seyakareruka uye nekumusoro-kumagumo kupfuura akawanda machira emasofa.
Kunyangwe iri dehwe kana sofa remucheka ivo vese vanopa runako uye kugona kumba kwako, imba yako yekurara, imba yako yekudyira, kana yako imba yekutandarira. Saka, inotarisa kumusoro kune sarudzo yemunhu. Iwe unoda here kuti sofa rako rive iro hombe dhizaini mune yako yekutandarira imba? Ndeapi ekushongedza maitiro iwe aunofarira, mazambiringa kana zvemazuva ano? Iwe unotarisira kuve zviri nyore kuimba yako? Ndozvose zvatichazofunga kana tichisarudza masofa.
Kunze kwekunyaradzwa, mutengo uye maitiro, kuchengetedza kungave chinhu chakakosha kuzeza. Leather iri nyore kwazvo kuchenesa uye inodhura mashoma nguva, nepo machira achida kubviswa uye kucheneswa nguva dzose. Sofa reganda rinogona kugara kwemakumi emakore kana rikachengetedzwa zvakanaka. Zvisinei, nepo ichifanirwa kugadziridzwa zvakaringana kudzivirira kutsemuka uye kutsemuka.
Nekuda kwechinhu chisina mvura, chaunoita kunyorovesa tauro mumvura yakachena, kuuputira uye kupukuta kumeso kwesofa. Zvisinei, kana yekuchengetedza-kwenguva yakareba inoda yakakosha oiri uye kunyorera. Pamusoro pe, kana kamwe chete pasofa reganda rakakuvara, chifukidziro chekunze hachigone kutsiviwa, zvinova zvakaoma kubata. Kunze kwezvo, dzimwe mhuka dzakaita sekatsi dzajaira kubaya pasofa. Kana zvikaitika, kurongedza pasofa yakatarwa kana kutenga mamwe matoyi kuti kati ikanganise. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti masofa ematehwe akaomarara kugadzirisa uye kukwenya kunonetsa kugadzirisa, saka kana uine vana kana zvipfuyo kumba, machira emasofa akakodzera.
Kana iri jira, zviri nyore uye zviri nyore kuzvichengeta. Mazhinji ejira remasofa paseti anogona kubviswa uye kusuka. Kana iwe uchifunga kuti zvinonetsa kubata neino yakasviba upholstery, unogona kuibvisa wotumira kune yakashambidzika yakaoma. Kana iwe uchinetseka pamusoro pekupisa ingoisa chimeti kana zhizha rasvika wochitsiva nepadhi inodziya munguva yechando. Zvisinei, machira emachira ari kuenda kumapiritsi uye anopfeka akaonda nekushandisa kwakawanda, saka kusarudza sofa yemhando yepamusoro kunogona kudzora njodzi.
Micheka pasofa kazhinji inoumbwa nesirika, satin, hemp, corduroy uye nezvimwe zvinopfeka zvinodzivirira. Per ine yayo maficha. Iyo silika uye satin machira masofa anoratidza runako uye umbozha, kupa vanhu manzwiro akanaka. Zvisinei, iyo hemp uye corduroy masofa anotaridzika kurema uye echinyakare, uye zvinoita sekunge chimiro chechisikigo uye zvakapusa.
Sarudzo yematehwe masofa zvinhu zvakakura, zvakare. Makanda akasiyaniswa anogadzira akasiyana mhedzisiro. Iwo masofa ematehwe masofa anotarisana nawo, kusununguka kwechisikigo, kuoma kwedanda remombe, pfava pamusoro, kukwirira kwemavara, kusimba kwakanaka, kukwana kwemhepo, uye yakakwira michini simba. Iyo yakanyanya kusarudzika ndeye yayo yakakwira misodzi misodzi uye yakasimba tensile iyo inovandudza iro reganda pasofa hupenyu. Dzinowanzopatsanurwa kuita mhando mbiri, ganda rakatetepa kana rakakora. Dhizaini yesofa yakatetepa yeganda inomirira yakapusa uye yakajeka nzira.
Yakakwirira-mhando masofa ematehwe akapfava kubata, kugara zvakanaka, kudziya muchando uye kutonhora muzhizha. Nekuda kwekugadzirwa kuri nani, mutengo unodhura kupfuura machira. Kune akawanda marudzi emachira emasofa ayo ese anopa vanhu manzwiro akasiyana. Masofa akagadzirwa nemicheka yesilika anogara achiratidza vanhu kunzwa kwakanaka, uye masofa akagadzirwa nehemp ari nyore. Kubva pakuona kwezvinhu, matehwe ematehwe anogara kwenguva refu.
Pane chokwadi chekuti isu taigara tichiregeredza kuti masofa ematehwe ari chaizvo hypoallergenic. Kana mumwe munhu aine kurwara kwezvakatipoteredza, ipapo izvi zvinogona kunge zvisina basa kunyangwe pasofa rakamira sei. Kusiyana nesofa jira, matehwe ematehwe anoteya mashoma guruva, petander, nezvimwe zvinowirirana, izvo zvinogona kukonzeresa kurwara. Saka, enzanisa nesofa rejira rakapa mubhedha unodziya we allergen uneasy kujekesa dehwe sofa rinoratidzika kunge sarudzo iri nani. Zvirokwazvo, hazvigoneke kuchengeta jira pasofa risina ma allergener, asi zvichave zvinodhura nguva yakawanda uye kutora zvakanyanya kushanda kupfuura mubhedha weganda munzira refu
Heano mimwe mibvunzo inobatsira kuzvibvunza iwe kana uchitenga machira kana sofa reganda:
Une chero mhuka dzinovaraidza? Ndezvipfuyo zvako vacheche vako here? Isu tinowanzokurudzira machira evaridzi vedzimba nekuti vanogona kukwenya dehwe rinodhura nekukamba kwavo. Zvisinei, kana iwe uri mudzidzisi akangwara pazvipfuyo, ipapo zvese zvakanaka.
Une vana here iwe? Vanowanzo netsaona dzese maronda here? Vanowanzo tamba pasofa? Kana zvese hongu, Vimba neni, dehwe rinogona kukushandira iwe wakareba uchienzaniswa nemucheka. Nepo ingangoita isiri nzira yekudzivirira hudzvinyiriri hwevana vadiki, chirongwa chekudzivirira kukanganisa chakakosha.
Sofa rako richava shamwari yenguva refu iyo inoda kuratidza yako inochinja dhizaini uye kugadzirisa zvako zororo zororo. Kunyangwe kusarudza jira vs.. pasofa reganda (kana zvinopesana) ingaite senge yekushongedza, iyo inokanganisa kureba kwechidimbu mumba mako. Chinhu chakanaka isu tine sarudzo yakawanda paruoko.
Maitiro ekutarisa kana uchitenga dehwe uye mucheka sofa
1. Tarisa yekunze upholstery iyo inofanira kunge yakasimba zvakakwana. Ita shuwa kuti hapana asina kushata makwikwi uye mapanga kufambisa iwo maitiro.
2. Lining pamusoro pasofa inofanira kunge yakati sandara, pasina zvikorekedzo, mbambo dzinobuda, kana chikafu, izvo zvinokuvadza vanhu uye mbatya dzakabvaruka.
3. Ukabata simbi kana furemu, uchiri kunzwa iyo iripo kona iyo zvinoreva kuti lining chivharo chiri nyore kupfeka munguva pfupi, kunyanya padyo nenzvimbo yekugara.
4. Cherekedza kana mapatani akaenzana, uye masitepisi anoshandiswa pakushongedza akaenzana.
5. Mushoni haufanire kuturikwa kumberi kwechigaro. Kubatana kunofanirwa kuve kwakamanikana sezvinobvira pakati pemukosho, armrests, backrest, uye pasofa.
6. Tarisa uone kana mawrestrests nemasofa makumbo akatsiga, huni hwematanda hwakatsetseka. Mushoni unofanirwa kuve nerutsigiro rwakakwana uye uchienderana nesofa kumashure.
7. Leather sofa rinowanzo kuve neasingaonekwe echromatic aberrations, kunyangwe madiki madiki, saka teerera kumatehwe eganda akatenderedza nzvimbo dzese.
Upholstery Jira uye Mhando dzeDehwe
Vazhinji vatengi vangangotadza kudzidza mhando dzeupholstery jira uye dehwe izvo zvinobatsirawo kutora jira kana dehwe. Mhando dzeupholstery jira dzinogona kunge dzakasikwa tambo kana dzakagadzirwa nevanhu. Hechino chirevo chipfupi chemachira emachira aunowana kana uchinge watarisana nesarudzo dzakasiyana dzemachira.
Shinda dzepanyama idzo dzinoenderera mberi firita zvigadzirwa zvinobva mumiti kana mhuka. Vanowanzoita kunge vakapfava, yakanaka kushongedza uye inofadza, kugadzikana kubata. Kune mana tambo dzepanyama sezviri pazasi maficha.
Chengetedza kupisa uye kudziya; Kunogara, kurema kupfuura mamwe machira; Kuunyana uye kusvibisa kusagadzikana; Pfeka ruvara nyore, kupera kusagadzikana; Antibacterial, anodzivisa hwema
Kumeso kwakatsetseka, nyoro asi haitsvedza; Ganda uye kutarisirwa kwebvudzi nekuda kwechisikirwo cellular alben; Madhayi uye anodhinda mushe; Kuneta nekudikitira, zuva, sipo; Inodzivisa ivhu, nokuvhuvha, uye zvipfukuto; Inoda kutarisirwa chaiko, kuchenesa yakaoma
Inonyaradza uye inofema; Zvisikwa zvakasununguka zvisina makemikari.; Hypoallergenic uye haigumbure ganda.; Renewable uye biodegradable.; Kushambidza michina.; Inowanzo tenderera uye kuunyana zvakawanda.; Tambo dzepanyama dzinopera nekukurumidza
Natural fiber ine yakaderera kusvibiswa kwezvakatipoteredza; Yevashandi-yakasimba yekugadzira; Nomuzvarirwo, zvipembenene zvinodzinga; Inobata unyoro mushe - kusvika 20% zvekurema kwayo; Kunotonhorera kwakasarudzika uye kutsva mumamiriro ekunze anopisa uye ane hunyoro; Hypoallergenic, inokodzera ganda rinonetsekana kana kurwara; Inobatwa nechirwere uye ziya; Zvakaoma kubvisa mabhureki
Munhu akagadzira shinda
Synthetic munhu-yakagadzirwa fiber inogadzirwa nevanhu kuburikidza nemakemikari synthesis, zvinopesana neshinda dzepanyama dzakatorwa zvakananga kubva kuzvinhu zvipenyu. Zvinosanganisira nylon, polyester, acrylic, polyolefin vinyl, nezvimwewo. Heano maficha eaya akagadzirwa nevanhu mafibre mhando.
Inodzivisa kutambanudza uye kutetepa; Inogona kuwachika kana kuoma; Kutarisirwa kuri nyore sezvo kuchiramba kuunyana, kupera.; Resistant kune mazhinji makemikari; Haizo nyoro kana kutora mvura; Static uye pilling matambudziko; Mafuta emafuta akaoma kubvisa; Isiri-yezvakatipoteredza-inoshamwaridzika
Yakagadzirwa kubva mukunyunguduka pasi mapelleti epurasitiki, zvinobatira moto; Yakakwira yakasimba simba; Kunogara, inopesana nekusvibisa; Yakawanda hombe uye yekuvhara; Inobata ruvara rwayo ; Varombo bonding zvivakwa, zvakaoma kupenda; Zvishandiso zvinogona kuratidza kuora
Chiedza chisina kuremerwa, nyoro, uye inodziya, mvere-senge ruoko; Unogona kutevedzera dzimwe shinda, dzakadai sedonje; Madhayi kune akajeka mavara; Kwete-allergenic; Anodzivisa zvipfukuto, mafuta, makemikari, chiedza chezuva; Inokwevera hunyoro kure nemuviri uye inogona kuwacha; Tambura kubva kunyorera nekunetseka kweabrasion
Yakasimba asi inorema zvishoma pane chero imwe fiber inowanzo shandiswa; Zvakawanda zvinotambanudza zvinhu ; Yakanyanya hunyoro inopinza, kufema.; Yakanyanya kusagadzikana neabrasion, muforoma, kuora uye kuunyana; Yakagezwa nyore, uye inopesana nekupararira kwemafuta.; Kukanganiswa nezuva uye, yellows nezera; Kuramba kune mafuta uye mazhinji makemikari; kutsva kwakadzika uye nzvimbo inonyunguduka
Dyes nyore uye inogadzira yakajeka mavara
Yakaunzwa kuti ifanane nesirika, makushe, kana donje
Smooth, yakasimba uye isingadhuri
Hapana static kana pilling matambudziko
Kazhinji inoshandiswa mumisanganiswa
Wrinkles zviri nyore kunze kwekunge kurapwa esp kwagezwa
Inowanzo tora hunyoro, muviri mafuta, nemvura
Inoitisa zvishongedzo zvekushandisa mumwaka unotonhora
Kuita kwakanaka kusina mvura
Inosanganiswa nemhando dzakasiyana dzekushongedza
Nyoro uye ine chitarisiko choumbozha
Pfeka nekukurumidza nekushandisa
Zvakanyanya guruva rinopinza
Leather uye jira pasofa - musanganiswa akakwana chero maitiro
Zvisinei nekupa mazano akawanda, Ini ndinofungidzira kuti mumwe munhu achiri kunzwa achizeza kusarudza kuti ndeipi iri nani kuenda kune dehwe kana jira. Pano isu ticharatidza imwe pfungwa yakanaka kuve nezvose zviri mumba mako nekusanganisa iro rakanaka reganda uye jira pasofa rinoenderana nemukati mako nenzira inoyevedza..
Ose maviri ematehwe uye machira masofa akasanganiswa mune rustic uye Mediterranean mukati, Anosanganisira vapfumi uye kumeso unaku, inozorodza kwazvakarerekera mavara uye kunzwa kwekudziya. Sofa reganda imhando yemidziyo yechinyakare iyo yagara ichibatana neumbozha uye mazambiringa. Mucheka upholstery, pane rimwe divi, inopa nyaradzo yakajairika, kudziya uye kunzwa kwepamba. Kamwe wovasanganisa ivo mukati me rustic mukati, dehwe uye jira pasofa upholstery inoratidzira inotaridzika inotaridzika inoita kunge inogamuchira vaenzi kuti vashanyire. Mapiro akapfava mumatoni akanyarara ndeyekuwedzera kwakaringana pasofa. Maruva uye maratidziro esofa anosunungura imwe runako runokwezva kune kushongedzwa kwemukati. Chimbofungidzira iwe ugere pamoto uye unakidzwa nekutsemuka kwehuni uye kutamba kwemarimi. Hazvingave zvinoshamisira uye nerunyararo rukuru rwemukati?
Leather uye jira pasofa, kunyangwe zvave zvakajairwa kune mamwe echinyakare magadzirirwo, isu takawana yavo chaiyo nzvimbo mune zvemukati zvemukati. Vertical uye yakatambarara mitsara, mavara akafanana uye akasiyana, chinova chiratidzo chenguva dzose chesofa remazuva ano. Iyo pendi yemavara inoiswa pane yakasarudzika nhema, chena chena, navy bhuruu, kana musanganiswa wemabhuru aya, pamwe neyakajeka grey ruvara. Grey rinotaridzika zvakaenzana zvakasanganiswa nechena kana chena. Leather uye machira ekushongedzwa anopa ekupedzisira asina kujairika nyaradzo uye chimiro asi hazvishamise zvachose. Masofa akanaka echikamu kana masofa emakona ndiyo nzvimbo yekugara yevaenzi vako nemhuri, iyo inosanganisirwa nyore nyore mukati meazvino uye mashoma emukati. Iyo mapiro ekushongedza anowanzo kuve neakakosha vara kana mashoma mashoma eimwe vara pasina ekushongedza mapatani. Iyo dehwe uye sofa yemucheka ine dhizaini yazvino inoitirwa kuve wepakati mukamuri uye chidimbu chekutaurirana. Modular masisitimu anopa mukana wekugadzirisa zvakare zvigaro zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunofarira.
Sofa inzvimbo yakakosha mukamuri rese maunobvisa kushushikana, vaneta uye vakaipa mamoods. Iyo nzvimbo inoitika inonakidza uye inodziya zvinhu mazuva ese. Ini ndinotenda zvinonetsa kusarudza yeganda kana jira pasofa muzviuru zvemamodeli. Zvisinei, mhinduro yacho haina chokwadi chekuti ndeupi ari nani uye kumusoro kwako nemhuri yako. Chero bedzi ichizadzisa zvido zvako uye inogadzirisa imba yekushongedza, icho chichava chinhu chinonakidza kusarudza.
Chinyorwa chinotevera →
Matagi: Tenga sofa yakaiswa
Nguva yekutumira: 2020-11-27